Xulafada Boqortooyada Sucuudiga oo 13 qodob shuruud uga dhigay Qatar- Warbixin
Home WARARKA Xulafada Boqortooyada Sucuudiga oo 13 qodob shuruud uga dhigay Qatar- Warbixin
Riyadh/Doha(Berberanews):-Boqortooyada Sucuudiga iyo qaar ka tirsan Xulufadaha Carabbeed ee uu hoggaamiyo ee horraantii bishan xidhiidhka u jaray Qadar, aya Dalab ka kooban 13 Qodob oo ad-adag u gudbiyey dawladda Qadar, kuwaas oo ay ka mid yihiin inay xidho Telefeshinka Al-Jaziira, inay xidhiidhka u jarto Iiraan, inay xidho Saldhig Millateri oo Turkigu ku leeyahay qadar iyo kuwo kale, haddii ay rabto inay la heshiiyaan oo ay Xayiraadda ka qaadaan Xulufada Xidhiidhka u jaray Qadar.
Dawladaha Sacuudiga, Masar, Isu-tagga Imaaraadka Carrabta iyo Baxrayn, ayaa ka dalbatay Qadar in ay albaabbada u laabto guud ahaan Warbaahinta Al-Jazeera, in ay Magdhaw ka bixiso khasaaraha iyo dhibaatooyinka dhawrkii sano ee u dambeeyey ay si toos ah iyo si dadbanba ugu lug-lahayd Qadar ee waddamada Carabta ka dhacay, in ay joojiso taageerada Ururrada Argaggixisada loo aqoonsaday oo markii horeba ay dalalkaasi ku eedeeyeen inay Qadar Maalgeliso, sida Xamaas, Daacish iyo kuwo kale. Qodobbadaas oo u muuqdo kuwo culus oo qaarkood ay adagtay fulintoodu, ayey Afarta Dawladood ee soo saaray ka dalbadeen Qadar inay muddo toban maalmood ah kaga go’aan gaadho.
Eedaynta ay Sucuudiga iyo Xulufadiisa Carbeed ku u jeediyeen markii ay xidhiidhka Siyaasadeed, Ganacsi iyo isu-socodka-ba u jareen u jeedeen oo ah inay Qadar maal-geliso Argaggixisada iyo Ururrada Xag-jirka ah, ayey Qadar ku tilmaantay eedayn aan xaqiiqda waafaqsanayn oo aanay waxba ka jirin, waxaanay wakhtigaas ku doodday inaanay waxba ka jirin eedaymahaas.
Qadar ayey labo toddobaad saaran tahay xayiraad dhaqaale, mid dublamaasiyadeed iyo weliba mid dhinaca isu-socodka ah oo ay ka xidheen Dalalkaasi Xuduudaha ay la wadaagaan ee Cirka, Badda iyo Dhulkaba. Arrintaas oo aan la filaynin, ayaa noqotay culayskii ugu waynaa ee dalalka Khaliijka ka dhacda muddo tobannaan sano ah.
Haddaba, Sida ay ku warrantay Wakaaladda Wararka ee AP oo heshay Liiska 13 Qodob ee ay Afarta dawladood ee Sucuudiga, Masar, Baxrayn iyo Isu-tagga Imaaraadka Carabta ee Dubai u gudbiyeen Dawladda Qadar ee ay ka dalbadeen inay muddo toban cisho ah kaga baaraan-degto ama kaga go’aan gaadho, ayaa iyaga oo turjuman waxay u dhignaayeen sidatan:-
Inay Qadar Xidhiidhka oo dhan u jarto Kooxda Ikhwaanu Muslimiinka Masar oo dalalka kale ee Carabta laga mamnuucay.
Inay si deg deg ah u xidhto Saldhigga Millateriga ee uu Turkigu ka dhisanayo gudaha dalka Qadar, xidhiidhka wada-shaqeynta Millateri-na ay u jarto Turkiga.
Inay xidhto Telefishinka Al-Jazeera iyo Laamaha Warbaahineed ee xidhiidhka la leh.
Inay u diido inay dhalasho siiso Muwaaddiniinta Afarta dal ee xidhiidhka u jaray, kuwa hadda joogana ay dalkeeda ka ceydhsio. Waxay sheegeen in taasi ay horseedi doonto in Qadar aanay faragelin ku sameyn arrimaha gudaha ee dalalkaasi.
Inay dalalkaasi ku soo wareejiso Shakhsiyaadka loo haysto inay ku kaceen falal argaggixisnimo ee dalkeeda ku nool.
Inay joojiso maalgelinta kooxaha uu Mareykanku ku sheegay inay yihiin Argaggixiso.
Inay Macluumaad badan ka bixiyso Kooxaha mucaaradka ah ee ay Qadar maalgelisay ee ku kacsan ama ka soo horjeeda Sucuudiga iyo dalalka kale.
Inay joojiso maalgelinta kooxaha Mucaaradka ku ah dalalka Sacuudiga, Imaaraadka, Masar iyo Baxrayn.
Inay u dhaqanto si waafqasan danaha dhaqaale iyo siyaasadeed ee dalalka ku jira Golaha Khaliijka.
Inay joojiso si dadban u maalgelinta Warbaahinta kala ah; Carabiya21 iyo Middle east Eye.
Inay bixiso Lacag Ganaax ah oo aan la sheegin caddadkeeda oo ah magdhawga saameynta ka dhalatay Siyaasadaha kahladan ee ay Qadar ku dhaqmeysay muddo sannado ah.
Inay 10 maalmood gudahood ku aqbasho dallabaadkan.
Inay aqbasho baadhitaanno iyo daba-gal joogto ah oo lagu eegayo sida ay u fulineyso dalabaadkan bilaha iyo sannadaha soo socdo.
Shuruudahan, ayaa lagu dhawaaqay ka dib markii Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Maraykanka Rex Tillerson uu dalalka ay Qadar deriska yihiin ugu baaqay in dalabkoodu uu noqdo mid sabab leh oo wax laga qaban karo. Hase-yeeshee, inkasta oo aanay dawladda qadar weli si rasmi ah uga hadal, haddana lama garan karo inay Qadar aqbali doonto dhammaan fulinta 13-kaas Qodob.
Masuul u hadlay Warbaahinta Al-Jazeera, ayaa Qaybta Dunida la hadasha ee BBC World u sheegay in Dalabkan Waddamada Carabtu ku xidheen Qadar ee mid ka mid ahi dhigayo inay xidho Warbaahinta Al-Jazeera uu yahay mid aan la aqbali karin, isla markaana ay muujiyeen inay ka soo horjeedaan Xorriyadda hadalka iyo Madax-bannaanida Fikirka Bulshooyinka ku dhaqan waddamadooda iyo Xuquuqda War-helidda ee Qof kasta oo nooli xaq u leeyahay inuu Xog helo oo wax ka ogaado wada ka dhacaya dunida iyo dalka uu ku nool yahay-ba.
Saxafiyiintu waxay sheegayaan in Jahwareer uu haysto Maraykanka oo raadinaya sidii uu ku xallin lahaa khilaafkan, taas oo ka dhalatay wakhtiga ay qaadatay in Sucuudiga iyo dalalka kale ay si rasmi ah u soo gudbiyaan waxa ay dalbanayaan, isaga oo Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump markii ay dalalkan Sucuudigu hoggaaminayaa xidhiidhka u jareen Qadar horraantii bishan June 2017-ka, sheegay inuu arrinta Qadar aad ugaga hadlay Shir Hoggaamiyeyaasha Islaamka iyo Isaga ku dhex-maray magaalada Riyadh ee Caasimadda Sucuudiga dhammaadka bishii hore, isaga oo Trump ku faanay in hadalkiisu soo dedejiyey go’aanka Carabtu gedoomiyeen Qadar.
Waddamada laga dalbaday dawladda Qadar inay xidhiidhka u jarto ee Iiraan iyo Turkiga, ayaa markii la gedoomiyey u gurmaday Qadar, isla markaana Diyaarado Cuntooyin kala duwan iyo Dawooyin ah u raray Qadar, isaga oo Turkigu ku dhawaad Boqol Diyaaradood oo Cunto iyo Dawo sida u diray Qadar oo ah Saxare aan wax-soo-saar lahayn, isla markaana Cuntooyinka iyo Qudaarta ka qaadan jiray dalalka Xidhiihdka u jaray. Dawladaha Turkiga iyo Kuweyt, ayaa hore u sheegay inay dhex-dhexaadinayaan Qadar iyo Xulufada Carbeed ee Sucuudigu hoggaamiyo.
Sucuudigu oo hormuud ka ah go’aanka lagu gedoomiyey Qadar, intii khilaafku jiray waxa uu armay inaanay Xajka sannadkan Muwaaddiniinta Qadar ka qaybgeli doonin, halka uu Muwaaddiniinta dalkaas ku amray inay waddankiisa ka baxaan, kuwooda ganacsiyada ku lihina xidhaan, sidoo kalena amray in la tarxiilo Geel Qadar laga leeyahay oo Dhulka Sucuudiga joogay, arrimahaas oo noqday kuwo lala yaabo oo laban-laabay Culayska uu Qadar saaray. Balse, Tallaabooyinkaas ayey Dawladda qadar hore ugu tilmaantay kuwo lala yaabo oo muujinaya Cadaawad iyo in aan la dhawrin Xuquuqaha Diiniga ah iyo kuwa Aadamahan ee Caalamka toona.
Dawladda Soomaaliya, ayaa iyadu mawqif dhex-dhexaadnimo ka qaadatay go’aanka Sucuudiga iyo Xulufada Carbeed ee uu hoggaaminayaa ku gedoomiyeen Qadar, iyada oo Xukuumadda Federaalka Soomaaya go’aankaas ka dib War ay soo saartay ku sheegtay inay dhex-dhexaad ka tahay khilaafkaas, isla markaana soo jeedinayso oo ay ku baaqayso in khilaafkaa la xalliyo, iyada oo loo marayo Jaamacadda Carabta iyo Ururka Islaamka oo ay Soomaaliya, Qadar iyo dalalka kaleba Xubno ka wada yihiin.
Hase-yeeshee, Dawladaha Liibiya, Jabuuti, Eritrea, kuwo kale iyo Somaliland oo aan iyada weli la aqoonsan, ayaa taageeray go’aanka ay Sucuudiga iyo Xulufadiisu ku gedoomiyeen Dawladda Qadar, waxaaanay taasi sababtay in Qadar Ciidammo Millateri ah oo nabad-ilaalin 8 sano uga joogay Dhulka ay 2008-dii ku dagaallameen Jabuuti iyo Eritrea.
Cabdifataax I. Mursal
Previous articleMujaahidiin Taallooyin looga sameeyay Aw-Barkhadle
Next articleQaar ka mid ah xildhibaannada Baarlamaanka Somalia oo mooshin ka gudbiyay Raysal-wasaaraha